'अब प्रदेश सरकार हात बाँधेर बस्दैन'| Nepal Pati
शनिबार, कार्तिक २४, २०७५
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच मुनमुटाव छ । अधिकार सम्बन्धमा देखिएको अघि बढ्ने र छेक्ने रणनीतिमा अघि बढेको छ । विषेशगरि प्रदेश नम्बर २ सरकारसँग झन धेरै कुरा मिलेको छैन । प्रहरी ऐनलाई स्थगन गरेको प्रदेश सरकार अहिले के गर्दैछ ? प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँगको छोटो सम्वाद
अहिले छठको तयारी भइरहेको छ । सरकारले हिसावले जनतालई सेवा सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने छलफलमा छु । त्यसका लागि कानुन बनाउने गृहकार्य पनि चलिरहेको छ ।
केन्द्रको दवावमा प्रहरी ऐन तर रोकियो । अर्को कानुन आउँदैछ ?
रोकिएको होइन । केही समयमा लागि स्थगन भएको हो । केन्दै सरकारले हामी नै कानुन ल्याछौ केही समय रोकि दिनुपर्यो भनेकाले हामीले सहयोग गरेको हो । केही समय हेर्छौ संघिय सरकारले हामीलाई सहयोग पुग्नेगरि अगाडी बढेन भने त्योसँगै अरु कानुन पनि जारी हुन्छन् ।
संघीय सरकारलाई चेतावनी हो ?
चेतावनी होइन । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको हुँ ।
तपाई लाइन मिचेर ओभर टेक गर्न थाल्नुभयो भन्ने बुझाई छ संघिय सरकारको दलका नेताको ?
जसले त्यसो भन्छ त्यसले संविधान राम्ररी पढ्नुपर्छ । संविधानको धारा २६८ को २ स्पष्ट रुपमा पढ्नुस । प्रत्येका प्रदेशमा प्रहरी संगठन हुन्छ भनेर लेखेको छ । सोही धाराको ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको काम सुपरिवेक्षण संघीय प्रहरी अनुसार गर्नुपर्छ । उक्त धाराको २ र ३ मध्ये कुन पहिला कार्यान्वयन हुन्छ ? पहिला २ कार्यान्वयन हुन्छ । मैले यही कानुन अनुसार काम गर्न खोजेको हुँ । अनि कसरी लाइन मिचेर ओभर टेक भयो ?
पहिलो संघीय कानुन बनेपछि त्योसँग नबाझिनेगरि प्रदेश अघि बढ्नुपर्ने होइन ?
संघीय कानुन पाँच वर्षसम्म बन्दैन रे, हामी त्यही कानुन कुरेर बस्ने ? प्रदेश हात बाँधेर बस्दैन । प्रदेशले पनि अब आफ्नो काम गरेर देखाउछ । मधेशी, मुस्लिम, थारु, दलित र पहाडका जनजातीले अधिकार कानुन नभई कसरी दिलाउने ?
बजेट अनुसार जनताले पाउने सेवा सुविधा भन्दा कानुन बनाएर शक्तिशासली बन्ने होड किन त ?
काम गर्ने हो । तर काम गर्न कर्मचारी खै । आवश्यक कर्मचारी पठाइएको छैन । ५ हजार कर्मचारी चाहिनेमा २ सय ५० जना मात्रै पठाइएको छ । अब कर्मचारी पनि प्रदेशले आफै नियुक्त गर्छ । त्यस अनुसार पनि छठपछि कानुन ल्याइदैछ ।